Aortic Stenosis (သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Aortic Stenosis (သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း)
Aortic Stenosis (သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း) ကဘာလဲ။
သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းတယ်ဆိုတာဟာ နှလုံးမှာရှိတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင် အပြည့်အဝမပွင့်ဘဲ နှလုံးကနေထွက်တဲ့သွေးပမာဏ နည်းပါးသွားတဲ့အခြေအနေကို ခေါ်တာပါ။ အဆို့ရှင်ဆိုတာ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးတဲ့ တံခါးပေါက်တစ်ခုလိုပါပဲ သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ဆိုတာကလည်း နှလုံးထဲမှာ စီးဆင်းနေတဲ့ သွေးတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့ အဆို့ရှင်လေးခုထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်တစ်ခုမှာ အဖတ်၃ဖတ်ရှိပါတယ်။ နှလုံးက အောက်စီဂျင်ကြွယ်ဝတဲ့သွေးတွေကို ယင်းအဆို့ရှင်ကနေတစ်ဆင့် ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့ကို ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းပြီဆိုရင် နှလုံးက ယင်းအဆို့ရှင်အပေါက်သေးသေးလေးကနေ သွေးထွက်သွားအောင် ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ပေးရပါတယ်။ နှလုံးဟာ အလုပ်တွေပိုလုပ်နေရတာကြောင့် အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ အရွယ်အစားကြီးလာသလို အားလည်းနည်းလားပါတယ်။
Aortic Stenosis (သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်းက မိန်းမတွေထက် ယောက်ျားတွေမှာ ၃ဆပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အသက်ကြီးရင် ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အန္တရယ်ရှိအချက်များကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Aortic Stenosis (သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အစပိုင်းမှာတော့ လက္ခဏာမပြပါဘူး။ အဆို့ရှင်ကျဉ်းလာပြီး သွေးစီးဆင်းမှုနည်းလာတာနဲ့အမျှ အောက်ပါလက္ခဏာတွေဖြစ်လာစေပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ရင်း သတိလစ်သွားခြင်း
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလုပ်မှ အသက်ရှုရခက်တာကနေ နားနေရင်း၊ လမ်းလျောက်နေရင်း၊ ညဘက်အိပ်နေရင်း အသက်ရှုရခက်ခဲတဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အထက်တွင်မဖော်ပြထားသော လက္ခဏာများလည်းရှိပါသေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုခံစားနေရပြီလို့ထင်ရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသပေးပါ။
အောက်ပါတို့ဖြစ်နေပါက ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က နှလုံးအဆို့ရှင်ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ထားခြင်း
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ ခန္ဓါကိုယ်တွေမတူကြပါဘူး။ မိမိအခြေအနေအတွက် ဘာကအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Aortic Stenosis (သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ယင်းအကြောင်းအရင်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မွေးရာပါနှလုံးမကောင်းခြင်း။ တစ်ချို့ကလေးတွေဟာ မွေးကတည်းက အေအော့တစ်အဆို့ရှင်အပြည့်အဝမပါလာကြပါဘူး။ ပုံမှန်အေအော့တစ်အဆို့ရှင်တစ်ခုမှာ အဖတ်၃ဖတ်ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ထရိုင်ကတ်စ်ပစ် အဆို့ရှင်လို့ခေါ်တာပါ။ မူမမှန်တဲ့အဆို့ရှင်တစ်ခုမှာ အဖတ်၁ဖတ်၊ ၂ဖတ်နဲ့ ၄ဖတ်အထိ ပါနိုင်ပါတယ်။ ယင်းချို့ယွင်းမှုတွေက ကလေးအရွယ်မရောက်မချင်း ပြဿနာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အဆို့ရှင်ပေါ်တွင် ကယ်ဆီယမ်များပုံလားခြင်း။ အေအော့တစ်အဆို့ရှင်က သွေးထဲမှာ ပါလာတဲ့ ကယ်ဆီယမ်အနယ်တွေကို ဖမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ကယ်ဆီယမ်တွေပုံလာပြီး အေအော့တစ်အဆို့ရှင်ဟာ မာမာတောင့်တောင့်ဖြစ်လာပါတယ်။ ထို့နောက် အဆို့ရှင်ကျဉ်းသွားပါတယ်။ အသက်၆၅နှစ်ကျော်ယောက်ျားတွေနဲ့ အသက်၇၅နှစ်ကျော်မိန်းမတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ယင်းရောဂါကြောင့် သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ပေါ်မှာ အမာရွတ်ဖြစ်လာပါတယ်။ အမာရွတ်က အဆို့ရှင်တွေကျဉ်းသွားစေနိုင်သလို ကယ်ဆီယမ်တွေကိုလည်း စုပုံရပိုလွယ်စေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အေအော့တစ်အဆို့ရှင်ကျဉ်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Aortic Stenosis (သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်းအန္တရယ်ကို မြင့်မားစေသော အချင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ယင်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ချို့ယွင်းချက်များ။ ထိုချို့ယွင်းချက်တွေက ပိုပြီးအန္တရယ်များစေပါတယ်။ မွေးတဲ့အချိန်မှာထဲက သိနိင်ပါတယ်။ ထိုမွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေကို ဆရာဝန်သိအောင် ပြောပြထားပါ။
အသက်အရွယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အေအော့တစ်အဆို့ရှင်မှာ ကယ်ဆီယမ်တွေပုံနိုင်ခြေ မြင့်မားလာပါတယ်။
အဆစ်ရောင်ဖျားနာရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း။ လေးဖက်နာရောဂါက အေအော့တစ်အဆို့ရှင်တွေ မာတောင့်လာစေပြီး အဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်းအန္တရယ်ကို မြင့်မားစေပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ။ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုအမျိုးအစား၂တို့နဲ့ အေအော့တစ်အဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်းကြားမှာ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ထိုအခြေအနေများကို ဆရာဝန်သိအောင် ပြောပြထားပါ။
Aortic Stenosis (သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ကိုယ်ခန္ဓါစစ်ဆေးချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း
‘မာမာ’နှလုံးခုံသံကိုလည်း ကြားရနိုင်ပါတယ်။ (နှလုံခုန်တဲ့တဲ့အချိန်မှာ အဆို့ရှင်ကို သွေးဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုကြောင့် ကြားရသော ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အသံဖြစ်သည်)
ပဲ့တင်သံလှိုင်းဖြင့် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း (ECG)
နှလုံးကို သံလိုက်လှိုင်းဖြင့် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း
အစာရေမြိုပြွန်မှ ECG ဆွဲခြင်း (TEE)
Aortic Stenosis (သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လက္ခဏာလည်းမပြ၊ ကျဉ်းတာကလည်း အနည်းငယ်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကုသမှုလိုအုန်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်နေဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရောဂါလက္ခဏာပြနေတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်တော့ အောက်ပါကုသနည်းတွေ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးဝါးဖြင့်ကုသခြင်း။ သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ဆက်မကျဉ်းအောင် တားဆီးနိုင်တဲ့ ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်းဆရာဝန်က သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကူညီပေးနိုင်မယ့်ဆေးတွေကိုတော့ ညွှန်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ထိုးဆေးဝါးတွေက ကိုယ်ခန္ဓါထဲမှာ ရေတွေမပြည့်နေအောင် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သလို၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ယင်းက နှလုံးအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း၏ ဆက်လက်ဆိုးရွားသွားမှုကို နှေးကွေးစေပါတယ်။
လက္ခဏာတွေ ပိုပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့ အဆို့ရှင်ကို ပြုပြင်ဖို့တစ်နည်းပဲ ရှိပါတော့တယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးဖြင့်အဆို့ရှင်ပြုပြင်ခြင်း။ ခွဲရစိတ်ရနည်းပါးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ။ ဘောလုံးနဲ့ဆက်ထားတဲ့ ပျော့ပျော့ပါးပါးပိုက်ကလေးကို ထိုးသွင်းပါတယ်။ ထို့နောက် ဘောလုံးကို သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်နားမှာထားပြီး လေဖောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဖောင်းလာတဲ့ပူဖောင်းက အဆို့ရှင်ကို ချဲ့လိုက်ပြီး သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းသွားစေပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ခဏတာသက်သာမှုကိုသာပေးနိုင်ပြီး ပြန်ကျဉ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ မခွဲစိတ်ချင်တဲ့လူနာတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုပါပဲ။
အဆို့ရှင်အားခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်း။ ယင်းကုသမှု ရွေးချယ်မှုကတော့ ခပ်ရှားရှားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပုံမမှန်တဲ့ အဆို့ရှင်အဖတ်တွေ ပေါင်းသွားနိုင်ခြေရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ လုပ်တာများပါတယ်။ အဆို့ရှင်တွေကို ခွဲစိတ်ခြင်းအားဖြင့် ချဲ့ပေးကာ သွေးစီးဆင်းမှုကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေတာပါ။
သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်အစားထိုးခြင်း။ စိုးရိမ်ရတဲ့ အဆို့ရှင်ကျဉ်းမှုတွေမှာ အဓိကရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်စီးနေတဲ့ အဆို့ရှင်ကို စက်ကိရိယာ အဆို့ရှင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ရှုးအဆို့ရှင်တို့ဖြင့် အစားထိုလဲလှယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ကိရိယာအဆို့ရှင်ကတော့ သွေးခဲနိုင်ပါတယ်။ ဝါဖရင်လိုမျိုး သွေးကြဲဆေးသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ရှုးအဆို့ရှင်ကိုတော့ နွား၊ ဝက်နဲ့ သေဆုံးသွားသော လူသားအလှူရှင်တို့မှ ရရှိတာပါ။ အားနည်းချက်တော့ နောက်ထပ်ပြန်ကျဉ်းနိုင်ပါတယ်။
ပိုက်ဖြင့်အဆို့ရှင်အစားထိုးကုသခြင်း။ ထိုကုသနည်းကတော့ သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းုခြင်းအတွက် အရွေးအများဆုံးပါပဲ။ လူလုပ်အဆို့ရှင်တစ်ခုကို ဘောလုံးပိုက်ဖြင့် ထည့်ပေးတာပါ။ အစားထိုးမယ့်အဆို့ရှင်အတွက် တစ်ရှုးကိုတော့ လူနာရဲ့ ပေါင်သွေးကြော ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ဘက်သွေးလွှတ်ခန်းကနေ ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆို့ရှင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကျဉ်းနေပြီး ထပ်တိုးရောဂါတွေရှိတဲ့အပြင် ခွဲစိတ်လို့မရတဲ့လူတွေအတွက် ယင်းကုသနည်းကို ရည်ရွယ်ထားတာပါ။
သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါလူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက သွေးလွှတ်ကြောမအဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေစေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နိုင်သလား၊ သင့်တော်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတွေကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မလား ဆိုတာ ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ၊ တောင်းဆိုပါ။
နှလုံးရောဂါရှိမယ်ဆိုရင် အငန်လျော့စားပါ၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ပါ။
အဆို့ရှင်အသစ်အစားထိုးကုသပြီးနောက် ရင်ဘတ်အောင့်မယ်၊ အသက်ရှုရခက်မယ်၊ ရင်တုန်မယ်၊ နှလုံးခုန်မြန်မယ်၊ သတိလစ်မယ်၊ လက်တို့ခြေထောက်တို့ ရုတ်တရက်အားနည်းမယ်၊ မျက်လုံးမကောင်းဖြစ်မယ်၊ အဖျားတက်မယ်၊ ခွဲထားတဲ့နေရာကနေ သွေးထွက်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသပေးပါ။
လေးဖက်နာနဲ့ သွေးတိုးလိုမျိုး အဆို့ရှင်ကျဉ်းစေနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကုသပေးပါ။
မေးစရာတွေရှိမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ပိုမိုနားလည်သိရှိစေရန်အတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Porter, Robert. Kaplan Justin. Homeier Barbara. The Merck manual home health handbook. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2009. Print. Page 383.
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012.Print. Page 7.
Aortic valve stenosis (AVS). American Heart Association. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/CongenitalHeartDefects/AboutCongenitalHeartDefects/Aortic-Valve-Stenosis-AVS_UCM_307020_Article.jsp. Assessed July 23, 2016.
What is heart valve disease? National Heart, Lung, and Blood Institute. http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hvd/. Assessed July 23, 2016.
How the healthy heart works. American Heart Association. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/CongenitalHeartDefects/AboutCongenitalHeartDefects/How-the-Healthy-Heart-Works_UCM_307016_Article.jsp. Assessed July 23, 2016.